ညစ်ညမ်းဂိမ်းလောကီသားတို့သည်အသင်သည်သင်၏ဒုတိယဘဝရဲ့တူခံစားရနိုင်အောင်အများကြီးပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြပြီးဂိမ်းကိုသင်ဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ထိုကမ္ဘာကြီးကိုညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါစိတ်ကူးယဉ်အမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအခမဲ့ဘီအမ်အိပ်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါအများဆုံးအစွန်းရောက်စိတ်ကူးယဉ်ဘို့အမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူလာကြ၏။ ဤနေရာတွင်ဂိမ်းများသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ထဲကတချို့ကနှလုံးအမောများအတွက်မှောင်မိုက်ဖို့လမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သူတို႔ဟာတကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀မွာႀကိဳးစားဖို႔ အရမ္းရက္စက္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။, ထိုဂရပ်ဖစ်ကျေးကျွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းတူသောခံစားရစေမည်,အရာအချို့ကစားသမားသူတို့အဘို့စိတ်မကောင်းခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်သင်အားလုံးအစွန်းရောက်အကြောင်းပါလျှင်,သင်သည်လက်ျာဆိုက်ပေါ်မှာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာအမွတ္တံဆိပ္အသစ္ေတြနဲ႔သာေတြ႕ရမွာပါ။ ဂရပ်ဖစ်မှအသံသက်ရောက်မှုများမှအရာအားလုံးသည်ဤဂိမ်းများတွင်အမှတ်ပေါ်သည်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်မှုသင်ရှိသည်အံ့သောငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များမှသင်၏ဘတ်စကားစိတ်ကူးယဉ်ပျော်မွေ့နိုင်သည့်မှတဆင့်ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူလာကြ၏။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏နာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်အခမဲ့အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ရလျှင်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းရင်းသင့်ရှိနိုင်ပါသည်။, သင်သာအသက် 18 နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်ပြုပြီးတာနဲ့,သင်သည်ဤတစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရ,အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမဆိုကြင်နာဘို့ငါတို့ထံမှတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်,သင်သာသင်ရှိစေခြင်းငှါအမှောင်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုအမာခံဂိမ်းတွေ့လိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မာစတာ၏ရှုထောင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တစ်ဦး၏ရှုထောင့်တစ်ခုခုမှအမာခံအချုပ်အနှောင်နှင့်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်ခရီဂိမ်းများရှိသည်။ သင်မာစတာအဖြစ်ကစားသည့်ဂိမ်းများတွင်သင်ပင်ဒိုမီနိုတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပြီးလိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းအမျိုးသမီးအထီးကျေးကျွန်ကျော်အကြွင်းမဲ့အာဏာရှိသည်နှင့်သူတို့တံစို့ရသို့မဟုတ်ဘီစီစီစီမှတဆင့်သူတို့ကိုထားရာအတွက်အထီးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။, သင်တစ်ဦးကျွန်အဖြစ်ကစားရသောဂိမ်းရှားပါးဖြစ်ကြပြီးသူတို့သင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များမှမတိုင်မီခံစားခဲ့ရဖူးဘူးအခြို့သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာပေးသွားမှာပါ။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးထက်သင်ပိုမိုပူဇော်သွားကြသည်သောအချို့သောညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိသည်။ ဤအာစီယံလိင်ဂိမ်းများတွင်သင်သည်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်တွေ့ဆုံရန်ယခုအချိန်တွင်မှသင်တန်းကိုစတင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသင်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုမေးဘာမှလုပ်ပါလိမ့်မယ်သူကိုလိင်ကျေးကျွန်တစ်ဟေးတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှုအတွက်အချို့သောမုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားဂိမ်းများပါဝင်သည်။, သူတို့ထဲကတချို့ကစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းကစား၌လာကြ၏နှင့်သူတို့သားကောင်၏ရှုထောင့်ကနေကစားနိုင်ပါတယ်,သငျသညျအစဉျအမွဲနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်းအရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းအတှေ့အကွုံဖွစျလိမျ့မညျ။ ဒီစုဆောင်းမှုပုံမှန်ဂိမ်းအသစ်လာပြီလိမ့်မည်,ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအသစ်နှင့်အတူယနေ့အထိတက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပါရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောလိင်ဂိမ်းများမှတပါးကျွန်ုပ်တို့သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောညစ်ညမ်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေခြင်းနှင့်ဂိမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝေမျှစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးမှုများအမျိုးမျိုးတို့ကိုပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအောက်မှာမှတ်ချက်အပိုင်းများရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်လည်းသင်အကြောင်းအရာများမဆိုအမျိုးမျိုးဆွေးနွေးရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်အတူလာကြ၏။ ရပ်ရွာအင်္ဂါရပ်များ၊ရုံဂိမ်းကဲ့သို့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏မည်သည့်ဧည့်သည်ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။, ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ရိုင်းပြေးကြကုန်အံ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များဝဘ်ပေါ်မှာအများဆုံးသောနှင့်အမည်မသိညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။